« Week | Week » စက်တင်ဘာလ 2015
ုko ko zaw (49), သပြေ (48), Thantzin, utunnaing (42),ုkoko (42), TinKyaw (39), ကိုကျော်နန္ဒ (38), မွန်မွန်1977 (38), linnlinnAKS (34), nyinyilatt27 (34), la pyae win (33), သိုးမည်း (33), suponechit, လပြည့် ဝင်း, sumay (32), zinmarshwe (32),ိMoeSet (31), မျိုးနိုင်ဦး, min khant hein (30), သီသီ (30), mahtaikhtarlatt (29), ဒီဖင်ဘာချစ်သူ, အနာဝါနောနော် (28), lamb of God (28), စိုးကျော် (27), tintinaye (27), zinbo (27), ကေးကေး (27), aungthantzin (27), soethuaung (26), စိုးသူအောင် (26), yephone (26), မိုးကုတ်သူလေး (25), devilnight (25), မီးမီးစံ, မွန်းလေး, William Gagarin (24), သက်မျိုးနိုင် (24), ကိုဖိုးအေး (21), ရဲကိုကိုဇော် (20) Birthdays
pokko (50), maungnoes (50), handsome (43), poenaung2 (42),့့မြတ်သူထွန်း, janlay (36), nlhtoon (35), myatmlz (35), ခိုင်ဇာစိုးမြင်. (34), ကျော်ဇေယျာလင်း (34), kyaw zin myat (34), သားကြီး(ygn) (33), ayechanlamin, maymoethagyi, စိုးစည်သူ (32), waitun23 (32), Soe Yan Pai, greenice (31), avrilnunu@gmail.com (31), နောင်တော်မင်း, phoenay, တိုးနီ (30), htwayhtway (30), taungporthar (30), wunnaag (30), navychit (30), September.rain (30), nyanay (30), ငါးကြော် (30), ကိုနေ ၃၅၅၂ (30), konayonline (30), မိုးတက်ခွဲ, moepannphyu, sainaungkhan, လူလေး (29), nay eunt khaung (29), khinmonmyat (29), ကေလေး (29), မြတ်ဟိန်းခန့် (29), စိုင်းခမ်းနောင်, lin lin (26), setemberboy (26), မြတ်လေးသူ (26), minsetwai (26), မင်းမင်း(မင်းမင်း) (25), Moon789 (25), kaungmyat (23), ခိုင်သန္တာညွန့်ဆွေ (23), khinemyintmyatnwetun (23), ကောင်းဇာနည်ထက် (23), ခိုင်မြင့်မြတ် (23), Sai Sit Naing Hein (22), mone (22), xxx.heroman.09, ဇာတ်ရှိန်တက်နတ်သမီး, Myo Zaw Aung, khun123 (19) Birthdays
myothandartun88 (61), kyawazayya (41), ဘုန်းကြီးကျောင်းသား (41), tin htoo aung (36), ဦးနေ (36), မနွယ်နီသန်း (36), nlhtet, Hmone Hmone, htunwin73 (35), firstsport, free voice (34), zawzawmyo, zawzaw_myo, hlaineeipyar (33), မင်းကြည်ညိူ (33), dihlaine (32), နောက်တိုး (32), လောရှည် (31), lwinlay (31), kappa (31),့ ခခူးလေး (31), ခင်​စိုး (31), tunnotepad (30), အောင်အောင်မင်းမောင် (30), အာရုဏ် (30), မောင်ရှမ်းလေး, တုန်ပီး, kyawhtinlatt (29), သွင်းလင်းရတီ, ညီညီ.N (28), ဇော်ရိုး (28), Psyche, shinemkg (27), ငြိမ်းချမ်းနောင်နောင် (27), ဟိန်းပြည့် (27), ပိုင်ဖြိုးအောင် (27), pyae pyae, honglay, ပလန်ကိုင်း (23), JueJue2008, ကလေးငယ် (21), Hamster (21), little mon εїз (21) Birthdays
mihominn, henrykhaing (48), nankoko (43), နန်းအေးကြည် (40), LayMoe (38), royal_oo (37), booo (37), T Oo (37), တင်ဇာလွင် (37), kyaw soe win, aung swe theik (36), ကိုချိုကြီး (36), tonetone1 (35), ookooo9975 (35), novaring9 (35), ပိုးဟပ်@gmail.com, maythadar (33), mralexmoe, ThanWinZan (32), ၀င်းမောင် (32), စိုးမြတ်, nyeinthantzin (31), အေးနောင်မင်း (31), htut oo khaing, pankalay (30), phoelapyaep (30), လင်းလတ်ဝင်းအောင် (30), စကားဝါ (30), မော်ကွန်းမင်း (29), ဇော်ရဲ (29), aungyezaw (29), zawyemg (29), စိုးကြီး (29), yutono, wera, ရဲရင့်ထက် (28), tayoke9 (28), ပန်ဒါ (28), မောင်ရန်နှိင်ထွန်း (28), bo bo (28), ပျံလွှားလေး (28), thurain (27), char2lan (27), ar lin sat (27), လေပြည် (27), ပုလဲ (27), နေရှင်းသန့် (27), zawhninlwin (27), ဝေဖြိုးဇော်(ခ)ဇော်ဇော် (27), စိုးလင်းနိုင် (27), သီတာလေး (27), nyeinnyein, ကိုမိုး, ထွန်းနေရောင် (26), htetnainglwin (26), Mr.Java, Aung Paing (25), phoewa (25), eimonmgmg (25), kyaw thet (25), ကေပီ (24), yuyutun2008 (23), ၇ဲထက် (23), ရဲထက် (23), showG (23), Paing Chit Thway (22), Jst Boomber (21), goodboy (21), Nay Yeik (21), Yamin Inzali (20), kyikyikalay (19), gtalklover0 (17) Birthdays
ကိုနိူင်, Maung Han Sein (45), နေထွန်း(နဝရတ်), naingmoemoe (41), ပန်းရောင် (40), ရဲရင့်သူ (35), ည တေ လေ (34), azphyo (34), skyman17 (33), mayletwin (32), ဇော်မျိုး (31), ရဲမြင့်ထွေး (31), aungmyooo (31), su kyi thein (31), ဖ်ိုးသကြား (30), zawminoo (30), myintaye2009 (30), ဖြိုးဝဏ္ဏ (30), wunna kyaw (29), seaman.navy (29), ရဲလျှံ (29), အညာသူမမ (29), ရောင်စဉ်လေး (28), ဟိန်းနောင်းစစ် (28), davidbogyi (28), တင့်ဇော်လှိုင် (27), ညီလင်းလင်း (27), ပင်လယ်သား (27), Htainlin88 (27), ယွန်းယွန်းလေး (27), myat thu (26), nayminhtet (26), hlaingsu2009 (25), ရဲမြင့်လုလင်မောင် (24), kue (24), မို.မို. (23), ပန်းရင့် (23), tarteepoe1993 (22), johnthu (22), natthameelay09 (21), သက်ဇော် Birthdays
tinthan (48), mdymaw (47), soepyit, မစိုး, မောင်ရွယ်ရောက် (37), myooozaw (37), kyawmyintkhine (37), မျိုးဇော်00001 (36), myozaw00001 (36), ငဖိန်း, အေငြိမ်းပန်း (35), symbolbeta (34), thanzaw (34), william (33), phoethar03 (32), လင်းကြာဖြူ, origination (31), soe paing (31), zayarmyo (31), wnnt (30), ၀င်းကျော်ကျော်ဦး (30), ကိုကို့ကို (30), စိုင်းစိုင်းလိုင်း (30), sanju (30), မိုးလေး (29), monmonsan007, မောင်ကီး, လူမော်, chogyi199 (28), thanhnwe (28), သန့်ဇင်ဋ္ဌေး (28), khaingtunhinthada@gmail.com (28), ဖိုးသား (27), မောင်ငယ်လေး (27), မိုးအာကာ (27), java, နေနေနေနေနေနေနေနေနေနေ (25), ဇော် (25), sai aung aung (25), kokoQ (24), ဂူးဂူး(SL) (24), ဇာယံ (24), slowlayphyu, htetpaing (23), heinhtetaung.aung (23), applegirl, mgthuya95 (20) Birthdays
အရှင်တေဇိန္ဒ (45), phyuphyutun56 (40), raymon, အောင်ထွန်းလင်3း (39), ကြော့ကေခိုင်, ညိုမင်းလူ (35), cocotin, kokosoe (34), sann linn tun (34), yelinnaing (33), လေးဇီးဘွိုင်း (32), kochanmin, mo3yak3 (31), akee, မသိမ့် , aung174 (30), blackNwhite (30), khinohmarlin (30), jerry (29), may myat noe (29), ကိုစစ် (29), သက်လွင်ဦး(နပတ) (29), သခွားသီး (28), ကိုထက်1 (28), k0ht3t, ခင်ဇော်ဟိန်း (27), ဝေဖြိုးမောင် (27), aprialaung0 (27), ghostlover (27), ညီစိမ်း, ka lay lay, kyisoehan007 (25), waiyan1291990 (25), kyi phyu thway (24), kkz (21), ကျော်သူဦး (21), အမှောင်လူသား (20), sanhtethlaing@gmail.com (20), ဇွဲကြီး (20) Birthdays